Ignition Shintsha 2110 - lokhu kuyinto kuyinkimbinkimbi kakhulu umklamo nokunokwethenjelwa imininingwane eyanele. Nokho, lona wamuva ngokuvamile iningi kuziwa izimoto amazwe. The ezifuywayo auto umkhakha akakwazi ukukhiqiza ukukhiya yokuthi ngeke behluleka okwamanje esibi.
Ngokuphawulekayo, ukuklanywa ingxenye kufana onobuhle amazwe, ngaphandle kwalabo ababenamakhono ikhadi ekhethekile kazibuthe esikhundleni ukhiye. Ignition 2110 inezigaba ezimbili. Leli thuluzi mechanical antitheft ukuthi kuboshwa kushaft kwekholomu ayo, futhi ingxenye lokuxhumana lebhokisi ezifundeni ezihlukahlukene zikagesi.
Vazovskaya idivayisi Ilokhi:
Leli bhokisi we inkinobho ukuthungela.
Projection ebanzi ingxenye contact.
Ukhiye ukuthungela has a izindlu 2110 ekwakheni yayo, futhi ehlanganisa zonke izici ezingenhla.
Indlela hlola ukuseviswa wengxenye?
Ukuxilongwa kwenziwa ngokubheka imininingwane efanele oxhumana wesifunda kwizindawo ezahlukene ukhiye. Futhi kubhekelwe ukusebenza kwethuluzi lesivikelo Vaz 2110. Ukhiye ukuthungela uma uphumile emgqeni, ngase ngokuphelele noma ingxenye (kuleli cala aluthola isibungu elisha). Nokho, abanikazi imoto ukuncoma ukuthenga lonke ucezu, ngakho ngeke lokudlela ezungeze ukufakwa faka ukhiye. Kube kuyodingeka bakhokhe imali eningi, kodwa ungagcina isikhathi esiningi. Lapho uthenga indlela eyodwa kuphela, okungukuthi izibungu, uzochitha amahora ambalwa ukuyifaka, ngesikhathi esifanayo ulondoloze imali yakho. Isinqumo sokugcina, yebo, thatha wena.
Ukususa inkinobho ukuthungela 2110?
Uma into namanje bewunephoso, kudingeka nakanjani ukuqala ukuliqaqa, ngoba imoto uzobe wenze kuphela pusher. Okokuqala sidinga ukulungisa amathuluzi. Ababona eziningi kakhulu. Konke esikudingayo - kuyisihluthulelo TORX T20 kanye ukufakwa kokumqoka kuphela ngensingo flat.
Ilungiselela amathuluzi, ungaqala ukusebenza
Okokuqala, susa le ukuphela lokususa sebhetri futhi uyasikrufulula nuts 2 okuyinto ukuxhuma Ezansi kanye engenhla ikhava ikholomu. Sabe uyisuse, bese kukhishwe iringi transponder. Ngokulandelayo, unqamule isixhumi amahanisi. Manje ubuka pad sensimbi iphaneli a plait ukuthungela. It esuswa umnikazi bese ukuhambisa isiqhebezo eceleni. Ngakho unqamule isixhumi. Eceleni esikhundleni Vaz ukuthungela 2110, ifakwe ukhiye uyivule ¼ ithuba. Isitsha sezimbali "umndeni okweshumi", lesi sikhundla kwakumelwe ibe isikhawu phakathi amamaki "A" futhi "M". Khona-ke ukususa ukuthungela amahanisi wezinsimbi zomculo iphaneli ichopho. Khona-ke udinga ukuthola amabhawudo ukuthi uvikelekile le ngxenye. ukuthungela Nuts futhi kudingeka asuswe, bese ukususa imininingwane esihle kakhulu yi-screwdriver lokususa. Thatha zonke izintambo kusukela inkinobho ukuthungela futhi uqhubeke ukufaka ezintsha ingxenye. It is eyenziwe oda reverse.
Car DVR Karki Q2 - izibuyekezo mayelana nezici Ukucaciswa